ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆ဝဝဝ နီးပါး နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရ - Yangon Media Group
ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆ဝဝဝ နီးပါး နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရ
ယခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၉ မှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆ဝဝဝ နီးပါးလက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွင် လျှောက်ထားခဲ့သူများထဲတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များအား လျှောက်ထားခဲ့သူ ၅၈၄ဝ ဦးကို လက်ခံခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များထဲ၌ အမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်မှာ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ၄၅၇ မှတ်အထိရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေမှာ လည်းသန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပြီးပါက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကျား/မစုစုပေါင်း ၃၃၂ ဦးဝင်ခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
”ဒီနှစ်ဝင်ခွင့်ကိုတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအမှတ် ၃၆ဝ နဲ့အထက်ရရင် လျှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ထဲမှာထည့်ခေါ်ခဲ့တယ်။ လျှောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာ တက္ကသိုလ်အလိုက်ဝင်ဆံ့အင်အားတွေနဲ့ အမှတ်အနည်းအများစဉ်ပြီးတော့ ဝင်ခွင့်ပေးတာပေါ့”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူက အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းအောင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်များတွင် လက်ရှိတက်ရောက်နေ သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင် နှစ် ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းများကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်စတင်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိ ငါးပတ်ကြာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သော ကျောင်းများတွင် ကျောင်းအပ်ခြင်းများကိုသွားရောက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၏ ပညာသင်နှစ်သည် ခြောက်နှစ်ဖြစ်ပြီး ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့မှာ ဘီအီးဘွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိဦးစားပေး လျှောက်ထားသော ကျောင်းများတွင် အမှတ်မမီခြင်း၊ သတ်မှတ်အရေ တွက်ပြည့်မီမှုများကြောင့် တက် ရောက်ခွင့်မရရှိပါက ဦးစားပေးအစဉ်လိုက်အမှတ်မီသော နည်းပညာတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော်ရှိပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃ဝဝဝဝ ကျော် ပညာသင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော ရှားပါးမျိုး စိတ်လိပ် ကြက်တူရွေးများကို လိပ်ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း၌ ??
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ် ဒဏ်ရာရခဲ့သဖြင့် ဂျာမနီ၏ ပွဲများကို ဂျိုအာချင်လို လွဲချော်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် NCA လက်မှတ် မထိုးရသေးသည့် အဖွဲ့ ခုနစ်ဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ၊ NCA တွ?
ဘီးလင်းသကြားစက် အတွက် ကြံကုန်ကြမ်း လုံလောက်စွာ ရရှိမှသာ သကြားကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင??
မတူညီသော အမှတ်ပေးဖလား သုံးခုရယူနိုင်သည့် စပိန်သားဖြစ်ရန် မိုရာတာ ရည်မှန်း